नेपालको २७ मुलुकसँग व्यापार नाफा र ११२ सँग घाटा - राेल्पा न्युज
१७ जेष्ठ २०७७, शनिवार
नेपालको २७ मुलुकसँग व्यापार नाफा र ११२ सँग घाटा
राेल्पा न्युज calendar_today १८ पुष २०७६, 12:20 pm
काठमाडौं,पुस १८ – वैदेशिक व्यापारमा नेपालले विभिन्न २७ मुलुकसँगमात्र नाफा गर्ने गरेको पाइएको छ भने ११२ मुलुकसँगको व्यापार भने घाटामा रहेको पाइएको छ। नेपालले कुल १३९ वटा मुलुकसँग व्यापार गर्ने गरेकोमा चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा २७ वटा मुलुकसँग व्यापार नाफामा रहेको भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा उल्लेख भएको छ ।
काजकिस्तान, यमन, कोलोम्बिया, कंगो, माल्दिभ्स, सुडान,अफगानिस्तान, होन्डुरस, हैटीलगायतका २७ मुलुकसँग व्यापार नाफामा रहेको विभागले जनाएको छ। नाफामा रहेका मुलुकमध्ये अधिकांशसँग न्यूनमात्र व्यापार हुन्छ। विभागका अनुसार काजकिस्तानमा १४ करोड १३ लाख रुपैयाँको सामान निर्यात भएको छ भने यमनमा ९१ लाख, कोलोम्बियामा ११ लाख १९ हजार, अफगानिस्तानमा १६ लाख ८६ हजार रुपैयाँ, होन्डुरसमा १० लाख ९० हजार रुपैयाँका वस्तु निर्यात भएको छ। तर, सबैभन्दा धेरै व्यापार हुने छिमेकी मुलुक भारत र चीनसँगको व्यापारमा भने ठूलो घाटा छ। आयात तथा निर्यात दुवैमा भारत अगाडि छ। विभागको तथ्यांकले निर्यातमा सामान्य सुधार भएको देखाउँछ ।
पाँच महिनाको अवधिमा निर्यात व्यापार २६.९७ प्रतिशत बढेको छ। सो अवधिमा ४७ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँको निर्यात भएको छ। आयात व्यापार ४.२४ रुपैयाँले घटेको छ। आयात र निर्यातमा देखिएको सुधार भने प्रशोधित पाम तेलका कारण हो। मलेसिया र इन्डोनेसियाबाट कच्चा पदार्थका रूपमा आयातित पाम तेल प्रशोधन भएर निर्यात हुन्छ। पाम तेलको निर्यात बढ्दा समग्र व्यापार बढेको हो। पाँच महिनामा ११ अर्ब ५२ करोड २८ लाख ६ हजार रुपैयाँको पाम आयल निर्यात भएको छ। यसअघि चार महिनामा८ अर्ब ३६ करोड ८५ लाख ८ हजार रुपैयाँकोपाम आयल निर्यात भएको थियो। आयातित पाम तेलले बढाएको निर्यात भने दिगो नहुने विज्ञहरुको भनाई छ। पाम तेल भन्दा पनि स्थानीय उत्पादन बढाएर निर्यात बढाउनुपर्ने व्यापार विज्ञको भनाई छ। सो अवधिमा ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको तेल निर्यात भएको छ ।
पाँचमहिना अवधिमा ६ खर्ब २८ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँको व्यापार भएको विभागको तथ्यांक छ। यो अवधिमा ५ खर्ब ३३ अर्ब ६४ करोडको व्यापार घाटा भएको छ। तथ्यांकअनुसार ५ खर्ब ८१ अर्ब २५ करोड रुपैयाँको आयात भएको छ। निर्यात भने ४७ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँको मात्रै भएको छ। निर्यात बढ्दै गएकाले आयातमा सामान्य कमी आएको छ ।
प्रशोधित पाम तेल भारत निर्यात हुन्छ । भारतले कृषि वस्तुमा सहुलियत दिएको छ। नेपाल सरकारले पनि निर्यात बढाउन सहुलियत दिएको छ।सबैभन्दा बढी भारतबाट ३ खर्ब ४९ अर्ब ६३ रुपैयाँको आयात भएको छ। निर्यात भने ३२ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँको मात्रै छ। दोस्रोमा चीनबाट १ खर्ब २ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँको आयात भएको छ। यस अवधिमा चीनमा ८६ करोड रुपैयाँको मात्रै निर्यात भएको तथ्यांकमा छ ।
सबैभन्दा बढी वीरगन्ज भन्सार नाकाबाट १ खर्ब ९६ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको आयात भएको छ। निर्यातमा पनि वीरगन्ज नाका नै अगाडि छ । यहाँबाट १४ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएको छ। आयातमा दोस्रोमा भैरहवा र त्यसपछि विराटनगर नाका छन् । पाँच महिनाकै अवधिमा भैरहवाबाट ९७ अर्ब ८५ करोड र विराटनगरबाट ६० अर्ब ६७ करोड रुपैयाँको आयात भएको छ । यी दुई नाकाबाट क्रमश १ अर्ब २४ करोड र १३ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँको निर्यात भएको विभागको तथ्यांक छ ।
कञ्चनपुरमा ठगी र लापरबाही गर्ने ३५ ब्यापारीलाई कैद तोकियो
‘नारायण नगरपालिकाले चाप थाम्न सक्दैन’
क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा जुटेका वडाध्यक्षको मृत्यु, कोरोना परीक्षण हुने
जोगबनी नाका हुँदै विराटनगर भित्रिए ३०४ नेपाली
बेलायतमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या ३७ हजार नाघ्यो
राेल्पा न्युज calendar_today १४ जेष्ठ २०७७, 2:18 am
१४ जेठ, काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कञ्चनपुरले संक्रामक रोग ऐन–२०२० मा टेकेर ४८ जना ब्यापारीलाई कारबाही गरेको छ । लकडाउनमा पनि अवैध तरिकाले ब्यापार व्यवसाय सञ्चालन गरेर संक्रामक रोग कोरोनाको नियन्त्रणमा बाधा पुर्‍याएको र महामारकिो मौका छोपेर कालोबजारी गरेको ठहर गर्दै कञ्चनपुर प्रशासनले ४८ जना ब्यापारीलाई जरिवाना र कैद सजाय सुनाएको हो ।
कञ्चनपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोकर्णप्रसाद उपाध्यायका अनुसार जनस्तरबाट विभिन्न किसिमले ठगिएको र पसलहरुमा तोकिएको सुरक्षा मापदण्डहरु पालना नभएको गुनासो आएपछि कार्यालयले वैशाख २९ देखि ५ गतेसम्म बजार अनुगमन गरिएको थियो ।
‘अरु समयमा हामी आफैंले अनुगमन गर्न मिल्दैन, तर यो ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर महामारकिो सयममा हामीले बजारमा अनुगमन गरेका हौं,’ उनले भने,‘सम्भवतः नेपालमै पहिलोपटक संक्रामक रोग ऐनमा टेकेर हामीले लापरवाही र ठगी गर्नेलाई सजाय पनि तोकेका छौं ।’
विषम परिस्थितिको मौका पारेर मूल्यमा ठग्न खोज्ने, उपभोग्य मिति सकिएको खाद्य पदार्थ बेच्ने, पसलमा ग्राहकबीच सामाजिक दूरी कायम नगराउने, सेनिटाइजर लगायतको प्रवनध नगर्ने ब्यापारीहरु कारवाहमिा परेका हुन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरले किराना, एग्रोभेट, मेडिकललगायतका पसलका सञ्चालकहरुलाई कारवाही गरेको हो ।
प्रशासनले एृन अनसार एक सय रुपैयाँ जरिवानादेखि २० दिनसम्मको कैद सजाय तोकेको छ । समान्य लापरवाही गर्ने १३ वटा फर्मले सय रुपैयाँ जरिवाना तरिेका छन् ।
१७ वटाले गम्भीर त्रुटि गरेकाले सञ्चालकलाई १५ दिनको कैद तोकिएको छ ।अति गम्भीर लापरवाही गरेको ठहर गर्दै १८ वटा फर्मका सञ्चालकलाई २० दिन कैद गरिएको उपाध्यायले बताए ।
‘ऐनको दफा ३ र ४ ले प्रशासनलाई यस्तो अधिकार दिएको छ,’ उनले भने,‘महामारी फैलिने जोखिम बढिरहेका बेला सरकारले जारी गरेको नियम पालना नगर्नेमाथि शुन्यसहनशीलताका आधारमा कारवाही गरेका हौं ।’
को-को परे कारवाहीमा ?
राेल्पा न्युज calendar_today १४ जेष्ठ २०७७, 2:02 am
१४ जेठ, दैलेख। नारायण नगरपालिका दुईतर्फी समस्यामा परेको छ । एकातिर आफ्ना ११ वडाका नागरिकको व्यवस्थापनको चुनौती कायमै रहेको छ भने अर्कोतर्फ जिल्लाका नौमूले, भगवतीमाई, भैरवी, दुल्लुलगायत पालिकाका नागरिकसमेत दैलेख सदरमुकाम आएर जाने क्रम बढेपछि थाम्न नसक्ने समस्या भएको नारायण नगरपालिका नगरप्रमुख रत्नबहादुर खड्काले बताए ।
उनले भने, ‘विभिन्न पालिकाबाट आएका व्यक्तिलाई नारायण क्याम्पसमै ल्याएर छाडिदिने अवस्था सिर्जना भएको छ । आफ्नै जिल्लाका नागरिक हुन् भन्दै आफूले उच्च सतर्कताका साथमा बासस्थान, खानपानको व्यवस्थापन गर्दै आएको भए पनि सयौँको सङ्ख्यामा अन्य पालिकाका नागरिक आएपछि समस्या भयो ।’
उच्च सम्मानका साथ व्यवस्थापन गर्दागर्दै देखिएका सानातिना कमजोरी देखेर विरोध गर्नेको प्रवाह नगरेरै काम गरिरहेको नगरप्रमुख खड्काले बताए ।
उनले भने, ‘नगरपालिकाको स्वास्थ्य टोली र जिल्ला स्वास्थ्य टोली उपचारका लागि क्वारेन्टिनमा पालैपालो काम गरेका छौँ । सुरक्षा अभाव हुँदाहुँदै पनि जनताको सुरक्षा प्रदान गर्ने काम भइरहेको छ ।’
उनले सबैसँग हातेमालो गरेर कोरोना सङ्क्रमणबाट जनतालाई जोगाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
राेल्पा न्युज calendar_today १४ जेष्ठ २०७७, 1:52 am
१४ जेठ, कैलाली । कञ्चनपुरमा क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा जुटेका एक जना वडा अध्यक्षको मृत्यु भएको छ । जिल्लाको कृष्णपुर नगरपालिका वडा नम्वर ७ का अध्यक्ष कल्लु रानाको मंगलबार राति मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले जनाएको छ ।
आफ्नै वडामा रहेको राष्ट्रिय माविमा क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा जुटेका उनी एक्कासी बेहोस भएका थिए । ५८ वर्षीय रानालाई सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार गर्ने लैजाने क्रममा मृत्यु भएको हो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक रविन्द्र पौडेलका अनुसार गएराति करिब १२ बजे उनको ज्यान गएको थियो ।
उनको शव सेती प्रादेशिक अस्पतालमा राखिएको छ ।
उनमा कोरोना संक्रमण थियो कि थिएन भनेर परीक्षण गर्ने अस्पतालले जनाएको छ । ‘शवको पोष्टमार्टम हुन्छ त्यसपछि स्वाब संकलन गर्छौं’ अस्पतालका मेसु डाक्टर हेमराज पाण्डेयले भने ।
राेल्पा न्युज calendar_today १४ जेष्ठ २०७७, 1:42 am
१४ जेठ, काठमाडौं । मोरङको विराटनगरमा भारतको जोगबनी नाका हुँदै ३ सय ४ जना नेपालीहरु भित्रिएका छन् । उनीहरुलाई गएराति उद्धार गरिएको मोरङ प्रहरीले जनाएको छ ।
भारतबाट आएकाहरुलाई विराटनगर–१३ स्थित डीएभी स्कुलको होल्डिङ स्टेसनमा राखिएको छ ।
३०४ जनामध्ये २३ जना सुनसरीका थिए । उनीहरुलाई दुहबी नगरपालिका वडा नं. ४ का वडा अध्यक्षले सुनसरीतर्फ लगेको मोरङ प्रहरीले जनाएको छ ।
माडी गाउँपालिका-५ भावाङ रोल्पा
© २०१३-२०२०rolpanews.com सर्वाधिकार सुरक्षित. Made with in Nepal by Gopal-Khatri